Adoptianisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Adôptianisma)
Ny adoptianisma na adoptionisma dia fampianaram-pinoana izay manambara fa tsy tonga zanak'Andriamanitra i Jesosy raha tsy natsangan' Andriamanitra ho zanany tamin'ny nanaovana batisa azy tao amin'ny ony Jordana. Tamin'ny taonjato faha-2 no nisehoan'izany fampianarana izany tao amin'i Teodoto avy any Bizantio. Te hamerina izay heveriny ho monoteisma madio i Teodoto tamin'izany. Nanohana ny fampianarana koa i Paoly avy any Samosata tamin'ny taona 268. Tamin'ny taonjato faha-8 tao Espaina dia nandray izany fampianarana izany ny arseveka Elipando avy any Toledo sy i Feliksa avy any Orgela (Urgell) izay eveka'io tanàna io.
2 Ny fampianarana ny amin'ny adoptianisma
3 Fanamelohana ny adoptianisma
4 Ny adoptianisma amin'izao andro vaovao izao
Ny teny hoe adoptianisma na adoptionisma dia fanagasiana teny avy amin'ny hoe adoption izay midika hoe "fananganana anaka" na "fananganan-jaza".
Ny fampianarana ny amin'ny adoptianismaHanova
Niteraka fifanoheran-kevitra teo amin'ny samy teolojiana ny fampianarana ny adoptianisma tamin'izany fotoana izany nandritra ny dimy ambin'ny folo taona nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-8 tao Espaina sy tao Frantsa. Tamin'ny taona 794 dia nanoratra taratasy ho an'ny evekan'i Frantsa sy ho an'i Feliksa avy any Orgela i Elipando evekan'i Toledo mba hanambaràny fa ny personan' ny Zanak'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny an'ilay zanak'i Josefa. Aminy dia zanak'i Maria irery ihany i Kristy ka tsy tonga zanak' Andriamanitra raha tsy tamin'ny nananganan' Andriamanitra azy ho zanany tamin'ny fanaovan'i Joany batisa azy. Amin'ny ankapobeny dia mandà ny fiteraham-birijiny an'i Kristy ny Adoptianista.
Fanamelohana ny adoptianismaHanova
Nambara fa fampianaran-diso ny adoptianisma tamin'ny faramparan' ny taonjato faha-2 ary nohelohin'ny mpivory tao amin'ny sinodan'i Antioka sy tao amin'ny konsily voalohany tao Nikea izay namaritra ny fampianarana ny amin'ny Trinite sady nanao an'i Jesosy ho Zanaka na Teny naterak' Andriamanitra ao amin'ny Fanekem-pinoana nikeana. Ny papa Viktorio I koa dia nanambara ny maha fampianaran-diso ny adoptianisma.
Ny adoptianisma dia nohelohin'ny papa Adriano I ka nisaina ho fampianaran-diso. Nanameloka azy koa avy eo ny konsily (na sinoda) tao Frankforta nampanaovin'i emperora Korolo Magno tamin'ny taona 794 araka ny torohevitr'i Paolino avy any Akoileia sy i Alkoino sy i Benedikto avy any Aniana ary i Leidrado avy any Liona. Ny sinoda tanao tao Rôma tamin'ny taona 799.
Niaraka tamin'i Alkoino i Karolo Magno mba hiady amin'io fampianarana io sady mba hampodiana amin'ny laoniny ny maha iray ny Vahoaka kristiana tao amin'ny Empiran'ny Tany Andrefana. Manoloana ny fahalemen'ny Kristiana tao Espaina izay teo ambany fahefan'ny Miozolmana dia nanohana ny Fiangonana ny emperora tamin'ny fiandaniany amin'ny papa. Nataon'ny emperora koa izany mba hamerenany ny ampahan'ny fahefany ara-politika ao amin'ireo faritra azon'ny Miozolmana. Niaro ny empira kristiana tamin'ny fampiasana ny sabatra izy ka i Alkoino no nanampy ny papa tamin'ny alalan'ny sabatry ny foto-pampianarana: izany no atao hoe foto-pampianaran'ny sabatra roa, izay iarovan'ny papa ny finoana sy iarovan'i Karolo Magno ny empira kristiana latina.
Niala ampahibemaso tamin'ny fanarahana ny adoptianisma i Feliksa rehefa noterena tao amin'ny konsily natao tao Ratisbona tamin'ny taona 792 tao Bavaria (na Baviera), avy eo nosamborin'ny papa Leona izy ka nogadrainy noho izy heverina fa niverina indray tamin'ny fampianaran-diso izay efa nialany. Maty tao am-ponja tao Liona i Feliksa tamin'ny taona 818.
Ny adoptianisma amin'izao andro vaovao izaoHanova
Ao amin'ireo fiangonana onitariana dia ahitana endrika adoptianisma nandritra ny taonjato faha-18 izay mandà ny fiteraham-birijiny an'i Jesosy araka ny fomba fijerin'i Joseph Priestly sy ny hafa koa.
Misy endrika adoptianisma koa ny ao amin'ny soratr'i James Strang, izay nitarika ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany taorian'ny nahafatesan'i Joseph Smith tamin'ny taona 1844. Ao amin'ny Book of the Law of the Lord ("Bokin'ny Lalàn'ny Tompo") nosoratany, izay lazainy fa avy tamin'ny soratanana tranainy hitan'i Strang ka nanaovany dikan-teny. Nanaovany fivoasana izany ka nomeny lohateny hoe "Note on the Sacrifice of Christ" ("Fanamarihana ny amin'ny Soron'i Kristy") izay anazavany ny foto-pampianarany ny amin'izany. Araka ny ambaran'i Strang dia zanaka avy amin'ny fifanambadian'i Maria sy i Josefa i Jesoa nefa voafidy talohan'ny fotoana rehetra mba hatao Mpamonjy ny olombelona, nefa tsy maintsy natera-dray sy reny toy ny olombelona mety maty izy (fa tsy zanaka nateraky ny Ray na ny Fanahy Masina) mba ho afaka hanatanteraka ny anjara asa maha Mesia azy. Nanambara i Strang fa ilay Kristy teto an-tany dia natsangana ho zanak' Andriamanitra tamin'ny fahaterahany, ary nambara miharihary izany tamin'ny Fiovan-tarehy teo an-tendrombohitra. Rehefa noporofoiny tamin' Andriamanitra ny fitondran-tenany tsy nisy ota dia afaka natao sorona ho an'ny fahotan'ny olombelona rehetra izy, talohan'ny fitsanganany amin'ny maty sy ny fiakarany any an-danitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Adoptianisma&oldid=980219"
Dernière modification le 28 Janoary 2020, à 04:55
Voaova farany tamin'ny 28 Janoary 2020 amin'ny 04:55 ity pejy ity.